सबिता माताले गरिन् डर*लाग्दो भबि*ष्यबाणी, राजतन्त्र पुनस्थापित हुन्छ, के होला त? - Public 24Khabar
Home News सबिता माताले गरिन् डर*लाग्दो भबि*ष्यबाणी, राजतन्त्र पुनस्थापित हुन्छ, के होला त?
सबिता माताले गरिन् डर*लाग्दो भबि*ष्यबाणी, राजतन्त्र पुनस्थापित हुन्छ, के होला त?
सबिता माताले गरिन् डर*लाग्दो भबि*ष्यबाणी, राजतन्त्र पुनस्थापित हुन्छ, के होला त? Sabita Mata Viral
रुपन्देहीको सै’नामैनामा नेपालकै ठूलो क्रिकेट रंगशाला ब’न्ने भएको छ। गौतमबुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेट रंगशाला नामाकरण गरिएको रंगशाला सै’नामैना ७ ल’म्टैयामा रहेको करिब १५ बि’गाहा जग्गामा निर्माण हुन लागेको हो ।नगरपालिकाले रंगशाला निर्माणको काम अगाडि बढाएको छ। गत वर्ष ३० लाख रुपैयाँ छु’ट्याएर मै’दान सम्याउने, शौ’चालय र ड्रे’सिङ रूम निर्माण गरिएकोमा यस वर्ष एक करोड बजेटमा माटो क’टिङ, ता’रबार र डि’पिआर बनाएको छ। यसअघि धुर्मुस सुन्तली फाउन्डेसनले चितवनमा रंगशाला निर्माण गर्नुपूर्व नगरपालिकाले यही स्थान रंगशालाको लागि फा’उन्डेसनलाई दिने भनेको थियो।
Previous articleदाजु भाईको कीन यस्ता प्रमाण हरु लुकाईयो आखिर बास्त’बिक्ता यस्तो रहिछ
Next articleससुराले ज्वाईले विदेश बाट पठाएको पैसाले घर बनाए। सबै पैसा खाए -छोरि अन्तै अर्कै संग पठाए